मोबाइलमा ब्याट्रीको चार्ज नटिकेर हैरान हुनुभएको छ ? यसो गर्नु भयो भने तपाइको ब्याट्रीको चार्ज टिक्छ « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मोबाइलमा ब्याट्रीको चार्ज नटिकेर हैरान हुनुभएको छ ? यसो गर्नु भयो भने तपाइको ब्याट्रीको चार्ज टिक्छ
मोबाइलमा धेरै समय ब्याट्री नटिकेर हैरानु हुनु भएकै होला । अझ लोडसेडिङ भइरहने ठाउँमा त ब्याट्रीको चार्ज लामो समयसम्म टिक्दैनन् । कतिबेला लाइन आउला र चार्ज गर्न पाइएला भनेर बस्नु पर्ने बाध्यता त छँदैछ ।
विभिन्न कामले बाहिर हिँडिरहनु पर्ने र चाहिएको समयमा मोबाइल चार्ज गर्न नपाउँदा ब्याट्री चाँडै सकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले चलाएका मोबाइलमा केही ध्यान दिने हो भने लामो समयसम्म ब्याट्री टिकाउन सकिन्छ ।